နေ့: အောက်တိုဘာလ52019
အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ကာဣနန်ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ibrahim Uslu, Mehmet Yildirim နှင့် Atilla Demirtunç TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က သူ၏ခရီးစဉ် Kamuran ပရင်တာများအတွက်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေဖို့တာဝန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran ပရင်တာမှတစ်ဦးခရီးစဉ်အတွင်းလက်ဆောင် [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin, ထိုအကဲဖြတ်အတွက်အတ္တလန်တာလေဆိပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်သက်ဆိုင်ရာလူမှုမီဒီယာအကောင့်ခရီးစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျပထမဆုံးအကြိမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပရှိချွန်ထက်တဲ့ "သုံးဆလမ်းကြောင်းစစ်ဆင်ရေး [ပို ... ]
Diyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်,207.00 17.30 ၏နာရီအတွင်းအကြား Bismil ခရိုင်အတွင်းရှိအခမဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပုံစံအတွက်နိုင်ငံသားများ၏အကျိုးအတွက်ပုံမှန်နေ့ရက်တိုင်းဆေးရုံဝန်ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသားများအတွက် Bismil ခရိုင်အတွင်းရှိအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းDiyarbakırတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, [ပို ... ]
ကြည်းတပ်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်ဒေါက်တာ Mehmet Hilmi Guler, တာကပင်လယ်နက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတံတားတည်ဆောက်ခဲ့ကမ်းရိုးတန်းလမ်း Meletti အပေါ်တံတားမှအခြားရွေးချယ်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မြစ် Melet ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကမ်းခြေလမ်းပေါ်တွင်မြူနီစီပယ်၏ကြည်းတပ်ပင်လယ်နက်ပဏာမခြေလှမ်း [ပို ... ]
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အနှေး, မြို့တော်အတွင်းရေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စကားမှတက်ကျောင်းသားများအတွက်တစ်ဦးဖတ်နေထောက်ခံမှုတစ်ဥပဒေကြမ်းပြည့်။ မိသားစုများ၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကိုရှင်းပြခြင်းမရှိဘဲနှေးကွေးသောသမ္မတမကြာမီအဝေးရောက်ကဒ်ကိုဆက်လက်မယ်လို့ [ပို ... ]
Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, ကပ်လျက်တည်ရှိခြင်းနှင့်မြူနီစီပယ်Taşucuဆိပ်ကမ်းနိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက် port ကိုလည်ပတ်ခွင့်ရှိသည်ခံရတူရကီရဲ့တစ်ဦးတည်းသောဂုဏ်ထူး။ ကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်၏လယ်ပြင်တွင်အရည်အချင်းပြည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဆိပ်ကမ်းလုပ် [ပို ... ]
Konya အတွက်သိပ္ပံပွဲတော်မှာ xnumx'inci, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးသိပ္ပံစင်တာ TUBITAK-ကိုကူညီခဲ့ Konya သိပ္ပံစင်တာစတင်ခဲ့သည်။ KONYA, အတိတ်နှင့်သိပ္ပံဗဟိုဌာနသည် LOCATION ဒီနေ့ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲမှာ Speaking Konya မြို့တော်ဝန် Ugur အီဘရာဟင် Altai များ၏ပြင်းထန်သောပါဝင်မှုနှင့်အတူရာအရပျကို ယူ. , [ပို ... ]
Trakya ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီစက်မှုလက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှုနှင့်ညှိနှိုင်းကာအေဂျင်စီနှင့်Tekirdağ, Çorluနှင့် Çerkezköy နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများစေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွင်း၌ကားများနှင့်စက်ခေါင်းကုမ္ပဏီများထုတ်လုပ်အမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်း. စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကုန်သည်များ [ပို ... ]
IMM ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem İmamoğlu, အောက်တိုဘာလ4Fatih အတွက်ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနေ့တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့်ကုသရေးယူနစ်များ၏အခြေအနေတွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါကင်မရာများ၏နောက်ဆုံးİmamoğluရှေ့, ဂျာနယ်လစ်များ၏အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ İmamoğlu, Haydarpaşaနှင့် Sirkeci ဘူတာထဲမှာ [ပို ... ]
ကားများနှင့်စက်ခေါင်းအမျိုးသားရေးကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သော Thrace အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖိုရမ်တစ်ခုမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်တင်ဆက်ကဏ္ဍ၏လှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အောက်ပါအစက်အပြောက်များနှင့်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အတူနှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူဆွေးနွေးပွဲတိုင်ပင်ခဲ့ကြသည်ကျင်းပခဲ့တယ်။ သည် "စက်ခေါင်း၏အစည်းအဝေးတွင်စက်မှုကိုယ်စားလှယ်များ [ပို ... ]
ကမ္ဘာ့ဖလားဖြစ်ရပ်များ၏မူဘောင်အတွင်း Izmir တူရကီကျောက်ချရပ်နားမြေထဲသဘာဝတရားထိန်းသိမ်းရေးဖောင်ဒေးရှင်း (WWF) အပြာရောင် Panda ရှကျလှေထဲမှာပလပ်စတစ်ညစ်ညမ်းမှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ထွက်ထားကြ၏။ WWF ကနှင့်အတူဤအခြေအနေတွင်ထဲမှာ, Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် "ပလတ်စတစ်က Non-စွန့်ပစ်မြို့ကြီးများကွန်ယက်" s ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက် [ပို ... ]
Kayseri တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့် Stop နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အမျိုးသားပညာရေးသင်္ချာစီမံကိန်း၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု Kayseri အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့် Stop နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အမျိုးသားပညာရေးသင်္ချာစီမံကိန်း၏ပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု Kayseri အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများနှင့်အရွယ်ရောက်ဘတ်စ်ကား [ပို ... ]